မေတ္တာပို့ နှင့် ကလေးကို ဘုရားရှိခိုး သင်တဲ့အခါမှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲ ~ Nge Naing
Saturday, July 02, 2011 Nge Naing 16 comments
သားကို မေတ္တာပို့ ပါဠိသင်ပြီး အဓိပ္ပာယ် ရှင်းပြရင်းနဲ့ တခြား မိဘတွေလည်း ဆန္ဒရှိရင်ကလေးတွေကို သင်ပေးချင်ရင်ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာချင်ရင် ဖြစ်စေ အသုံးပြုလို့ရအောင် မေတ္တာပို့ ပါဠိသီချင်းတွေကို မြန်မာလိုပါဠိ နဲ့မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကို ဖြည့်ပြီး ဘလော့ဂ်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းသံကို နားထောင်ရင်း မေတ္တာပို့ရဲ့ အနက် အင်္ဂလိပ်လို၊ မြန်မာလို (သို့) ပါဠိတို့ကို အလွယ်တကူ ခွဲပြီး ကြည့်လို့ အဆင်ပြေအာင် အရောင်ခွဲထားပါတယ်။ လူဝတ်ကြောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ ကျွန်ုပ်၏ ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယကာတွေဆိုပြီး အစချီထားတဲ့ နံပါတ် (၅) အပိုဒ်ပါ ဆုတောင်းကို ထည့်ဆိုဖို့ မလိုပါဘူး။ ပို့စ်တင်ခါစကတော့ မြန်မာပါဠိမရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ပါဠိအသံထွက်ကို ကျွန်မ တတ်သလောက် အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ရေးထားပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဒါတွေကို ဖျက်ပြီး ဆရာတော် ဓမ္မင်္ဂါရဲ့ မှတ်ချက်မှာ ပေးထားတဲ့ Link ထဲကအတိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုပါဠိစာသားတွေနဲ့ ပြန်အစားထိုးထားပြီမို့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ မြန်မာစာ ဖတ်မတတ်တဲ့ ကလေးတွေလည်း အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပါဠိကို ဖတ်ပြီး မေတ္တာပို့ကို လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ သားကို မေတ္တာပို့ သင်ပေးစဉ် စောတကတက်လို့ ကျွန်မကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ဖြေရှင်းပေးရတာကိုတော့ မေတ္တာပို့ ဗွီဒီယိုတွေ စာတွေ အပြီးမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို ပါဠိနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စာတန်းထိုးပြီး ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ မြန်မာလိုပါဠိ (သို့) မြန်မာစာမရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဗွီဒယိုဖြစ်တယ်။ (ဒီဗွီဒီယို Link ကို ညွန်းပေးတဲ့ ကိုအာယုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Nge Naing - 8/7/11)။
မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ကိုအသံနဲ့ ဘာသာပြန်ထားတာကို နားထောင်ချင်ရင် ဒီဗွီဒီယိုကို နားထောင်နိုင်ပါတယ် (စာတန်းထိုးမပါ)။
မြန်မာလိုအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပါဠိစာသားကို မြန်မာစာလုံးနဲ့ စာတန်းထိုးထားပါတယ်။ သီချင်းသံကိုပဲ ကြားချင်ပြီး ဘာသာပြန်တဲ့အသံကို မကြားချင်သူအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီဗွီဒီယိုလည်း မြန်မာလို စာတန်းထိုးဘာသာပြန်ထားပြီး သီချင်းအသံထွက်ကို ပိုပြီးပီပီသသ နားထောင်ချင်ရင် ဒီဗွီဒီယိုကို နားထောင်ပါ။ နိုင်ငံခြားအဆိုတော်တွေ ဆိုထားတဲ့ တခြားဗွီဒီယိုအားလုံးထက် စကားလုံးအသံပိုရှင်းပါတယ်။ (အဆို ဟေမာနေ၀င်း)
သီချင်းကို အင်္ဂလိပ်လို အသံနဲ့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ မြန်မာလို သိပ်မရတဲ့ ဖတ်တာထက် နားထောင်တာကို အားသန်တဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် ကလေးလေးတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဒီဗွီဒီယို ဖြစ်တယ်။ (စာတန်းထိုးမပါ)
The Chant of Metta (Pali, English, Burmese)
(1) အဟံ အဝေရော ဟောမိ (Aham avero homi)
ကျွန်ုပ်သည် ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာရပါလို၏
အဗျာပဇ္ဇော ဟောမိ (abyapajjho homi)
အနီဃောဟောမိ (anigha homi)
သုခိ အတ္တာနံ ပရိဟရာမိ(sukhi - attanam pariharami)
ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ရပါလို၏
(2) မမ မာတာပိတု(Mama matapitu - May my parents,)၊ အာစရိယာစ (acariya ca - teachers,)၊ ဥာတိမိတ္တာစ (natimitta ca - relatives and friends)၊ သဗြဟ္မ စရိနောစ (sabrahma - carino ca - follow dharma colleagues)
ကျွန်ုပ်၏ မိဘနှစ်ပါး၊ ဆရာသမားများအားလုံး၊ ဆွေမျိုး ညာတိကာ မိတ်ဆွေများအားလုံး၊ တရားကျင့်ဖေါ်များ အားလုံး...
အဝေရာ ဟောန္တု (avera hontu) May they be free from enmity and danger.
အဗျာပဇ္ဗာ ဟောန္တု(abyapajjha hontu) May they be free from mental suffering
အနီဃာဟောန္တု (anigha hontu) May they be free from physical suffering
သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု (sukhi - attanam pariharantu) ။ May they take care of themselves happily
ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။
(3) ဤမသ္မီ အာရာမေ သဗ္ဗေယောဂိနော။ (Imasmim arame sabbe yogino)
ဤအရပ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ယောဂီယူတော်စင်အားလုံး..
(4) ဤမသ္မီ အာရာမေ သဗ္ဗေဘိက္ခု (Imasmim arame sabbe bhikkhu - May all monks in this compound,
)၊ သာမဏေရာစ (samanera ca novices )၊ ဥပါသကာ ဥပါသိကာယောစ (upasaka - upasikaya ca - all members of the ecclesiastical order lay men and lay women and others )
ဤအရပ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ရဟန်း သာမဏေအားလုံး၊ သူတော်စင် အမျိုးသား သူတော်စင် အမျိုးသမီးအားလုံး..
(5) အမှာကံ စတုပစ္စယ ဒါယကာ (Amhakam catupaccaya - dayaka) May our donors of the four requisites of food, clothes, shelter and medicines
ကျွန်ုပ်၏ ပစ္စည်းလေးပါး၊ အလှူဒါယကာ ဒါယိကာမများအားလုံး..
(6) အမှာကံ အရက္ခ ဒေ၀တာ (Amhakam arakkha devata - May our guardian (devas) spirit )၊ ဤမံသ္မီ ၀ိဟာရေ(Ismasmim vihare - in this monastery)၊ ဤမံသ္မီ အာဝါသေ (Ismasmim avase - in this dwelling,)၊ ဤမံသ္မီ အာရာမေ (Ismasmim arame - in this compound...) အရက္ခ ဒေ၀တာ (arakkha devata - May the guardian devas)..... ,
ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်စောင့်နတ်အပေါင်း၊ ဤကျောင်းတော်အတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ ဤအဆောက်ဦးတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ ဤခြံကြီးအတွင်း၌လည်းကောင်း စောင့်ရှောက်ကြကုန်သော နတ်ဒေ၀တာများအပေါင်း....
(7) (1)၊ သဗ္ဗေ သတ္တာ (Sabbe satta - May all of beings, )၊ (2) သဗ္ဗေ ပါဏာ (sabbe pana - All breathing ones,)၊ (3) သဗ္ဗေ ဘူတာ (sabbe bhutta - all creatures,)၊ (4) သဗ္ဗေ ပုဂ္ဂလာ (sabbe puggala - all individuals, )၊ (5) သဗ္ဗေ အတ္တဘာဝ ပရိယာပန္နာ (sabbe attabhava - pariyapanna - all personalities (all beings with mind and body)...)၊ (6) သဗ္ဗေ ဤတ္ထိယော (sabbe itthoyo - May all females,)၊ (7) သဗ္ဗေ ပုရိသ (sabbe purisa - all males,)၊ (8) သဗ္ဗေ အရိယာ (sabbe ariya - all noble ones (saints), )၊ (9) သဗ္ဗေ အနရိယာ (sabbe anariya- all wanderers, all worldlings those yet to attain sainthood))၊ (10) သဗ္ဗေ ဒေ၀ါ (sabbe deva- all denties,)၊ (11) သဗ္ဗေ မနုဿာ(sabbe manussa- all human beings,)၊ (12) သဗ္ဗေ ၀ိနိပါတိကာ (sabbe vinipatika- All those four of nether would of miseries (woeful planes)...)
(၁) သက်ရှိ ကျား၊ မ - မဟူ သတ္တ၀ါအပေါင်း၊ (၂) ၀င်သက်ထွက်သက် ရှိကြကုန်သော သတ္တ၀ါအပေါင်း၊ (၃) အားလုံးသော သတ္တ၀ါ အပေါင်း၊ (၄) ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း၊ (၅) ရုပ်၊ နာမ် နှစ်ပါး ရှိကြကုန်သော သတ္တ၀ါ အပေါင်း၊ (၆) အမျိုးသမီးအပေါင်း၊ (၇) အမျိုးသား၏အပေါင်း၊ (၈) အရိယသူတော်စင်အပေါင်း၊ (၉) အရိယာ မဖြစ်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း၊ (၁၀) နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်း၊ (၁၁) လူသားအပေါင်း၊ (၁၂) အပယ်ဘုံသားအပေါင်း...
ဒုက္ခ မုစ္စန္တု (Dukkha muccantu- May all beings be free from sufferings and) ၊ ယထာ လဒ၊္ဓ သမ္ပတ္တိယော၊ မာဝိဂစ္ဆန္တု.(Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu - whatever they have gained, may they be no diminishment and destruction.(Not be lost)).....။ ကမ္မဿကာ (Kammassaka.-All beings are inheritors of their own karmma.....)။
ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှ ကင်းလွတ်ကြပါစေသတည်း။ ရရှိပြီးသော ဂုဏ်သိန်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာများလည်း မယုတ်လျှော့ကြပါစေ သတည်း။ ကိုယ်ပြုသော အမှုအတိုင်း ခံစား စံစားရသူချည်းပါတကား....
(8) (1) ပုရတ္တိမာယ ဒိသာယ (Purathimaya disaya - In the eastern direction,)၊ (2) ပစ္ဆိမာယ ဒီသာယ (pacchimaya disaya - in the western direction,)၊ (3) ဥတ္တရာယ ဒီသာယ (uttara disaya - in the northern direction, )၊ (4) ဒက္ခိဏာယ ဒိသာယ (dakkhinaya disaya - in southern direction, )၊ (5) ပုရတ္တိမာယ အနုဒိသာယ (purathimaya anudisaya - in the southeast direction,)၊ (6) ပစ္ဆိမာယ အနုဒိသာယ (pacchimaya anudisaya - in the northwest direction, )၊ (7) ဥတ္တရာယ အနုဒိသာယ( uttara anudisaya - in the southwest direction, )၊ (8) ဒက္ခိဏာယ အနုဒိသာယ (dakkhinaya anudisaya - in the northeast direction, )၊ (9) ဟေဋ္ဌိမာယ ဒီသာယ (hetthimaya disaya - in the direction below,)၊ (10) ဥပရိမာယ ဒိသာယ (uparimaya disaya - in the direction above..)...
(1)၊ သဗ္ဗေ သတ္တာ (Sabbe satta - May all of beings, )၊ (2) သဗ္ဗေ ပါဏာ (sabbe pana - All breathing ones,)၊ (3) သဗ္ဗေ ဘူတာ (sabbe bhutta - all creatures,)၊ (4) သဗ္ဗေ ပုဂ္ဂလာ (sabbe puggala - all individuals, )၊ (5) သဗ္ဗေ အတ္တဘာဝ ပရိယာပန္နာ (sabbe attabhava - pariyapanna - all personalities (all beings with mind and body)...)၊ (6) သဗ္ဗေ ဤတ္ထိယော (sabbe itthoyo - May all females,)၊ (7) သဗ္ဗေ ပုရိသ (sabbe purisa - all males,)၊ (8) သဗ္ဗေ အရိယာ (sabbe ariya - all noble ones (saints), )၊ (9) သဗ္ဗေ အနရိယာ (sabbe anariya- all wanderers, all worldlings those yet to attain sainthood))၊ (10) သဗ္ဗေ ဒေ၀ါ (sabbe deva- all denties,)၊ (11) သဗ္ဗေ မနုဿာ(sabbe manussa- all human beings,)၊ (12) သဗ္ဗေ ၀ိနိပါတိကာ (sabbe vinipatika- All those four of nether would of miseries (woeful planes)...)
(၁) အရှေ့ရပ်၌ရှိကြကုန်သော၊ (၂) အနောက်ရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၃) မြောက်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၄) တောင်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၅) အရှေ့တောင်ထောင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၆) အနောက်မြောက်ထောင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၇) အရှေ့မြောက်ထာင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၈) အနောက်တောင်ထောင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၉) အောက်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၁၀) အထက်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော...
ဒုက္ခ မုစ္စန္တု (Dukkha muccantu- May all beings be free from sufferings and) ၊ ယထာ လဒ၊္ဓ သမ္ပတ္တိယော၊ မာဝိဂစ္ဆန္တု.(Yattha-laddha-sampattito mavigacchantu - whatever they have gained, may they be no diminishment and destruction.(Not be lost)).....။ ကမ္မဿကာ (Kammassaka.-All beings are inheritors of their own karmma.....)
ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းလွတ်ကြပါစေသတည်း။ ရရှိပြီးသော ဂုဏ်သိန်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာများလည်း မယုတ်လျှော့ကြပါစေ သတည်း။ ကိုယ်ပြုသော အမှုအတိုင်း ခံစား စံစားရသူချည်းပါတကား....
(9) ဥဒ္ဓံယာဝ ဘ၀ဂ္ဂါစ(Uddham yava bhavagga ca - Upward as fare as highest apex of existence,)၊ အဓောယာဝ အ၀ီစိတော (adho yava aviccito - downward as far as to the lowest plane of avici hell)၊ သမန္တာ စက္က၀ါဠေသု (samanta cakkavalesu - in the entire universe. )၊ ယေသတ္တာ ပထ၀ီစရာ(ye satta pathavicara - whatever terminal beings that live on earth,)၊ အဗျာပဇ္ဇာ နိဝေရာစ(abyapajjha nivera ca - May they all be free from mental suffering and enmity,)၊ နိဒ္ဒုက္ခာစ နုပဒ္ဒ၀ါ။ (nidukkha ca nupaddava and may they be free from physical pain and danger.)
အတက်ဘ၀ဂ်၊ အောက်အ၀ီစိ ရှိရှိသမျှ အနန္တစင်္ကြာဝဠာ ကုန်းနေသတ္တ၀ါအားလုံး ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
(10) ဥဒ္ဓံယာဝ ဘ၀ဂ္ဂါစ(Uddham yava bhavagga ca - Upward as fare as highest apex of existence,)၊ အဓောယာဝ အ၀ီစိတော (adho yava aviccito - downward as far as to the lowest plane of avici hell)၊ သမန္တာ စက္က၀ါဠေသု (samanta cakkavalesu - in the entire universe. )၊ ယေသတ္တာ ပထ၀ီစရာ(ye satta udakecara - whatever terminal beings that live in the water,)၊ အဗျာပဇ္ဇာ နိဝေရာစ(abyapajjha nivera ca - May they all be free from mental suffering and enmity,)၊ နိဒ္ဒုက္ခာစ နုပဒ္ဒ၀ါ။ (nidukkha ca nupaddava and may they be free from physical pain and danger.)
အတက်ဘ၀ဂ်၊ အောက်အ၀ီစိ ရှိရှိသမျှ အနန္တစင်္ကြာဝဠာ ရေနေသတ္တ၀ါအားလုံး ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
(11) ဥဒ္ဓံယာဝ ဘ၀ဂ္ဂါစ(Uddham yava bhavagga ca - Upward as fare as highest apex of existence,)၊ အဓောယာဝ အ၀ီစိတော (adho yava aviccito - downward as far as to the lowest plane of avici hell)၊ သမန္တာ စက္က၀ါဠေသု (samanta cakkavalesu - in the entire universe. )၊ ယေသတ္တာ ပထ၀ီစရာ(ye satta akasecara - whatever terminal beings that live in the arial space)၊ အဗျာပဇ္ဇာ နိဝေရာစ(abyapajjha nivera ca - May they all be free from mental suffering and enmity,)၊ နိဒ္ဒုက္ခာစ နုပဒ္ဒ၀ါ။ (nidukkha ca nupaddava and may they be free from physical pain and danger.)
အတက်ဘ၀ဂ်၊ အောက်အ၀ီစိ ရှိရှိသမျှ အနန္တစင်္ကြာဝဠာ ကောင်းကင်နေသတ္တ၀ါအားလုံး ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
(မေတ္တာပို့ ပါဠိကို အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ရေးထားတဲ့ Link ကို Comment နေရာမှာ ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဓမ္မဂင်္ဂါကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (သာဓု)၃ ပါဘုရား။)
အင်္ဂလိပ်လို စာသားက ဒီနေရာမှာ စာတန်းထိုးထားတာကို ပြန်ရိုက်ပြီး ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
(၁) ကျွန်ုပ်သည် ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာရပါလို၏
(၂) ကျွန်ုပ်၏ မိဘနှစ်ပါး၊ ဆရာသမားများအားလုံး၊ ဆွေမျိုး ညာတိကာ မိတ်ဆွေများအားလုံး၊ တရားကျင့်ဖေါ်များ အားလုံး...ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။
(၃) ဤအရပ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ယောဂီယူတော်စင်အားလုံး..ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။
(၄) ဤအရပ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော ရဟန်း သာမဏေအားလုံး၊ သူတော်စင် အမျိုးသား သူတော်စင် အမျိုးသမီးအားလုံး..ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။
(၅) ကျွန်ုပ်၏ ပစ္စည်းလေးပါး၊ အလှူဒါယကာ ဒါယိကာမများအားလုံး..ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။
(၆) ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်စောင့်နတ်အပေါင်း၊ ဤကျောင်းတော်အတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ ဤအဆောက်ဦးတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ ဤခြံကြီးအတွင်း၌လည်းကောင်း စောင့်ရှောက်ကြကုန်သော နတ်ဒေ၀တာများအပေါင်း....ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။
(၁) သက်ရှိ ကျား၊ မ - မဟူ သတ္တ၀ါအပေါင်း၊ (၂) ၀င်သက်ထွက်သက် ရှိကြကုန်သော သတ္တ၀ါအပေါင်း၊ (၃) အားလုံးသော သတ္တ၀ါ အပေါင်း၊ (၄) ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း၊ (၅) ရုပ်၊ နာမ် နှစ်ပါး ရှိကြကုန်သော သတ္တ၀ါ အပေါင်း၊ (၆) အမျိုးသမီးအပေါင်း၊ (၇) အမျိုးသား၏အပေါင်း၊ (၈) အရိယသူတော်စင်အပေါင်း၊ (၉) အရိယာ မဖြစ်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း၊ (၁၀) နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်း၊ (၁၁) လူသားအပေါင်း၊ (၁၂) အပယ်ဘုံသားအပေါင်း...ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ မွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။
(၈) (၁) အရှေ့ရပ်၌ရှိကြကုန်သော၊ (၂) အနောက်ရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၃) မြောက်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၄) တောင်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၅) အရှေ့တောင်ထောင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၆) အနောက်မြောက်ထောင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၇) အရှေ့မြောက်ထာင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၈) အနောက်တောင်ထောင့် အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၉) အောက်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော၊ (၁၀) အထက်အရပ်၌ ရှိကြကုန်သော...
(၉) အတက်ဘ၀ဂ်၊ အောက်အ၀ီစိ ရှိရှိသမျှ အနန္တစင်္ကြာဝဠာ ကုန်းနေသတ္တ၀ါအားလုံး ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
(၁၀) အတက်ဘ၀ဂ်၊ အောက်အ၀ီစိ ရှိရှိသမျှ အနန္တစင်္ကြာဝဠာ ရေနေသတ္တ၀ါအားလုံး ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
(၁၁) အတက်ဘ၀ဂ်၊ အောက်အ၀ီစိ ရှိရှိသမျှ အနန္တစင်္ကြာဝဠာ ကောင်းကင်နေသတ္တ၀ါအားလုံး ဥပါဒ်ရန်ဘေး ကင်းစင်ဝေး ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
အင်္ဂလိပ်လို သီးသန့် မေတ္တာပွားချင်သူများအတွက်
The Chant of Metta Text (ENGLISH)
(1) May I be free from enmity and danger, May I be free from mental suffering, May I be free from physical suffering, May I take care of myself happily
(2) May my parents, teacher relatives and friends, fellow Dhamma farers ...be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering, may they take care of themselves happily
(3) May all meditators in this compound, be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering. May they take care of themselves happily
(4)May all monks in this compound, novice monks, laymen and laywomen disciples... be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering, may they take care of themselves happily
(5) May our donors of the four supports: clothing, food, medicine and lodging.. be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering, may they take care of themselves happily
(6) May our guardian devas in this monastery, in this dwelling, in this compound. May the guardian devas..be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering, may they take care of themselves happily
(7) May all beings, all breathing things, all creatures, all individuals (all beings), all personalities (all beings with mind and body), may all females, all males, all noble ones (saints), all worldlings (those yet to attain sainthood), all devas (deities), all humans, all those in the four woeful planes...be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering, may they take care of themselves happily
-May all being be free from suffering, May whatever they have gained not be lost, All beings are owners of their own Kamma.
(8) in the eastern direction, in the western direction, in the northern direction, in the southern direction, in the southeast direction, in the northwest direction, in the northeast direction, in the southwest direction, in the direction below, in the direction above...
- May all beings, all breathing things, all creatures, all individuals (all beings), all personalities (all beings with mind and body), may all females, all males, all noble ones (saints), all worldlings (those yet to attain sainthood), all devas (deities), all humans, all those in the four woeful planes...be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering, may they take care of themselves happily
(9) As far as the highest plane of existence to as far down as the lowest plane in the entire universe whatever beings that move on earth.. may they are free of mental suffering and enmityand from physical suffering and danger.
(10) As far as the highest plane of existence to as far down as the lowest plane in the entire universe whatever beings that move on water.. may they are free of mental suffering and enmityand from physical suffering and danger.
(11) As far as the highest plane of existence to as far down as the lowest plane in the entire universe whatever beings that move in air.. may they are free of mental suffering and enmityand from physical suffering and danger.
ကလေးကို ဘုရားရှိခိုး သင်တဲ့အခါမှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲ
ကလေးတွေက သိချင်စရာ များပြီး စူးစမ်းတတ်တဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်တော့ ကလေးမေးတာကို လူကြီးဖြေနိုင်ဖို့ တော်ရုံအသိနဲ့ သူတို့လက်ခံအောင် ဖြေဖို့ ဆိုတာ တကယ်ကို မလွယ်ပါဘူး။ ဒီမေတ္တာပို့ကို ငယ်ငယ်က ကျွန်မ သင်ဖူးပေမဲ့ ကျွန်မမေးတာကို သင်ပေးတဲ့အဖွားက မဖြေနိုင်လို့ ကျွန်မစိတ်မ၀င်စားတော့ဘဲ ဆက်မသင်ဖြစ်ပေမဲ့ အဖွားနေ့တိုင်း ဘုရားရှိခိုးရင် မေတ္တာပို့တဲ့ အသံနဲ့တော့ တရင်းတနှီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဖွားမရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မေတ္တာပို့သံနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုလို သီချင်းအနနဲ့ ဆိုထားတဲ့ မေတ္တာပို့ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာမှ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကျွန်မ ကြားဖူးပေမဲ့ ပါဠိစကားလုံးတွေကိုတော့ အဖွားဆိုနေတာကို နေ့တိုင်း ကြားခဲ့ရလို့ ကောင်းကောင်း ရင်းနှီးနေပါတယ်။ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေရာကနေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သီချင်းအဖြစ်နဲ့ ပြန်ကြားရတဲ့အချိန်မှာတော့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသာ မသိပေမဲ့ အဲဒီသီချင်းကို နားထောင်မိတိုင်း အဖွားမေတ္တာပို့နေတဲ့ အသံကို နားထဲမှာ ကြားယေင်လာပြီး စကားလုံးတွေကို ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း မေတ္တာပို့ရင် တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရရဲ့ မေတ္တာပို့နည်းအတိုင်း မြန်မာလိုနဲ့ အတိုချုပ်ပဲ သုံးပြီး ဆုတောင်း မေတ္တာပို့လေ့ရှိသလို သားကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ သင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီမေတ္တာပို့လေးက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ နည်းဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ မေတ္တာသုတ်ကို အခြေခံထားတယ်ဆိုတာ သိရတော့ ဒီမေတ္တာပို့ကိုပဲ ကျွန်မ ပြန်အသုံးပြုနေသလို သားကိုလည်း သင်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အခု စတင်သင်ပေးနေပါတယ်။ ဒီလို သင်ပေးရင်းနဲ့ အခုသားက စိတ်မ၀င်စား ဖြစ်နေတော့ အရင်က အဖွားကျွန်မကို သင်ပေးခဲ့တုန်းက အကြောင်းကို မှတ်မိနေပြီး မရှိတော့တဲ့ အဖွားကို သတိရလွမ်းဆွတ်မိပါတယ်။
အဖွားသင်တုန်းက ကျွန်မ စိတ်မရှည် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက်တွေကလည်း အခု သားကိုကျွန်မ သင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ သား စိတ်မရှည် ဖြစ်နေတဲ့အချက်နဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ အဖွားသင်ပေးတဲ့ ကျန်တဲ့ ဘုရားရှိခိုးတွေ အားလုံးကို ကျွန်မ အလွတ်ရခဲ့ပေမဲ့ မေတ္တာပို့ကိုကျတော့ ရှည်လို့ဆိုပြီး ကျွန်မ သင်ချင်စိတ် မရှိတာနဲ့ အဖွားက ကျွန်မကို ဆက်မသင်ပေးဖြစ်ခဲ့လို့ ကျွန်မ မရလိုက်ဘူး။ ဒီမေတ္တပို့ အပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်ခန့်က ကျွန်မ အမြင်နဲ့ အခုသားရဲ့ အမြင်က ထပ်တူ ဖြစ်နေပြီး မသင်ချင်ဖြစ်နေတော့ ကျွန်မမှာ သူသင်ချင်လာအောင် ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ပြောပြ၊ ဥပမာတွေလည်း ပေးပြီး အမျိုးမျိုး ရှင်းပြပြီး စည်းရုံးရပါတယ်။
မေတ္တာပို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို တပိုဒ်ချင်း သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ရင် ဆုတောင်းပိုဒ်တမျိုးတည်းကို မတူတဲ့ သတ္တ၀ါ အမျိုးမျိုးအတွက် အကွက်စေ့အောင် ထပ်ခါထပ်ခါ ဆုတောင်းပေးထားတာကို သတိထားမိလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ရှည်လွန်းလို့ ဆိုပြီး ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက စိတ်မရှည်ခဲ့သလို အခုကျွန်မသားကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတယ်။ "သတ္တ၀ါအားလုံးလို့ ပြောလိုက်ရင် အကုန်လုံး အကျုံးဝင်သွားပြီး တပိုဒ်တည်းနဲ့ ပြီးတဲ့ကိစ္စကို ရှည်ပြီး တမျိုးပြီးတမျိုး လိုက်ဆုတောင်းနေရတာ အချိန်မကုန်ဘူးလား မေမေ၊ အဲဒီ မေတ္တာပို့ဆုတောင်းကို ပထဦးဆုံး တီထွင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က တော်တော် စကားများတဲ့သူပဲ ဖြစ်မယ် ဘယ်သူလဲ မေမေတဲ့" ကျွန်မကို မေးလာတယ်။ ကျွန်မက "ဟဲ ..သား အဲလိုမပြောရဘူး ငရဲကြီးမယ် အဲဒါကို တီထွင်တာ တခြားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ မဟုတ်ဘူး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် တီထွင်ခဲ့တဲ့ မေတ္တာ စီးဖြန်းနည်းပဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးချင်းစီအတွက် ဆုတောင်းတာ လိုအပ်လို့ဆုတောင်းတာသာ ဖြစ်တယ်" လို့ ပြောတော့ သားက " ဒီလိုသာ တမျိုးပြီးတမျိုး လိုက်ဆုတောင်းနေရင် ဦးထုပ်အပြာ ဆောင်းထားတဲ့သူတွေ၊ ဘောင်းဘီအတို/အရှည် ၀တ်ထားတဲ့သူတွေ၊ အင်္ကျီအရောင် အမျိုးမျိုး ၀တ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါ မတူလို့ဆိုပြီး တမျိုးစီ ခွဲပြီး ဆုတောင်းပေးရမလိုလို ဖြစ်နေပြီး အဲလိုသာ ဆုတောင်းနေရရင် ဘယ်တော့ ပြီးမလဲ" လို့ ကပ်ဖဲ့ပြောပြီး ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် " မေမေငယ်ငယ်တုန်းကလည်း အဲလိုပဲ စိတ်မရှည်ဖြစ်ဖူးလို့ သားစိတ်မရှည်တာ မေမေ နားလည်လို့ရတယ်" ဆိုတာနဲ့ အစချီပြီး ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက အဖွားကို ပြောဖူးတဲ့စကားတွေကို ပြန်ပြောပြပြီး အဲလိုဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို ဥပမာတွေနဲ့ ပြန်ရှင်းပြရပါတယ်။ မေတ္တာသုတ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြလိုက်တယ်။
ကျွန်မတုန်းကတော့ ဒါဘုရားလက်ထက်ကတည်းက ဆုတောင်းလာတယ်ဆိုတာ အဖွားပြောလို့ သိထားပါတယ်။ သားကျွန်မကို ပြောသလို မဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်မလည်း အဖွားကို "တခါတည်းနဲ့ ဆုတောင်းလို့ရတဲ့ ကိစ္စကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဆုတောင်းနေရတာ ဘုရားလက်ထက်က လူတွေက ဒီလောက်တောင်ပဲ ထုံရအရလားအဖွား" လို့မေးဖူးပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သားကို ပြောပြတော့ သားက ကျွန်မကို သိပ်သဘောကျပြီးတော့ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ကို ရီနေတယ်။ အဖွားက ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားပြီး သူမေးတော့ "အဖွားက လိုအပ်လို့ ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာပဲ ပြောပြီး ဘာမှဆက်မရှင်းပြပါဘူး၊ နောက်ပိုင်း မေမေလည်း စိတ်မ၀င်စားတော့တာနဲ့ ဆက်မသင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သားကိုတော့ မေမေ အဲလို အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး မေမေက ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို မေမေသားကို ရှင်းပြနိုင်တယ်" ဆိုပြီး သူ့ကို ဆက်ရှင်းပြတယ်။
ကျွန်မသားက အကြောင်းအရာတခုကို လွယ်လွယ်နဲ့ လက်ခံတတ်သူ မဟုတ်တော့ ဆုတောင်းခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မတူလို့ ကွဲကွဲပြားပြား ဖြစ်အောင် အုပ်စုလိုက်ခွဲပြီး ဆုတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကို မတူဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို သူမြင်ယောင်လို့ရအောင် သူတကယ် နားလည်တဲ့အကြောင်းအရာ နဲ့ အရင် မိတ်ဆက်ဝင်ပေးရပါတယ်။ သူက ကလေးအခွင့်အရေးတို့ လူ့အခွင့်အရေးတို့ သိပ်ပြောတတ်သူဆိုတော့ မေတ္တာပို့က အကြောင်းအရာနဲ့ သိပ်မဆိုင်ပေမဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ အရင် ဥပမာပေးပြီးမှ ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ကျတာကို ကျွန်မ ပြန်ရှင်းပြပါတယ်။ သြစကြေးလျားမှာ ကလေး၊ လူကြီး၊ မိန်းမ၊ ယောက်ယျေ်ား၊ လူဖြူ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား အားလုံးဟာ လူတွေဖြစ်လို့ သူတို့တွေအတွက် အခွင့်အရေးကို ပြောတဲ့နေရာမှာအားလုံးခြုံပြီး အတိုချုပ်အနေနဲ့ လူ့အအခွင့်အရေးဆိုတာ တခွန်းတည်း ပြောလို့ရနိုင်ပေမဲ့ အဲဒီ တခွန်းတည်းက အားလုံးအတွက် အကွက်အစေ့အောင် မလွှမ်းချုံဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး စသည်ဖြင့် မတူတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို သီးသန့် ထပ်ပြီး ပေးရပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးအနေနဲ့ လူကြီးနဲ့ ကလေးကိုပဲ ကြည့်ပါ၊ လူချင်းတူပေမဲ့ အခွင့်အရေးချင်း မတူဘူးဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကလေးမှာ ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေ လူကြီးမှာ မရနိုင်တာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးတယောက် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာအောင် စောင့်ရှောက်ဖို့ မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူမှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မိသားစုမှာ ကလေးက ၀င်ငွေရအောင် အလုပ်လုပ်စရာ မလိုဘူး၊ ကလေးကို မိဘက ၀င်ငွေရတဲ့ အလုပ်လုပ်ခိုင်းရင် အဲဒီမိဘက Criminal ပဲ။ လူကြီးအတွက်ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး သူ့ဘ၀အဆင်ပြေအောင် သူကိုယ်တိုင်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တခြားတဘက်မှာတော့ လူကြီးရတဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာလည်း ကလေးကို ပေးလို့မရတာ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ ဥပမာ ကလေးကားမှောင်းလို့မရဘူး၊ မဲပေးလို့မရဘူး၊ အဲဒါတွေဟာ လူချင်းတူပေမဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကွဲပြားမှုရှိလို့ အခွင့်အရေးချင်း သီးခြားရှိတယ် ဆိုတဲ့သာဓက ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သားကို ရှင်းပြရတယ်။
သားကို ရှင်းပြရင်းက သူမငြီးငွေ့သွားအောင်လည်း ကျွန်မငယ်ငယ်က အဖွားဇရပ်မှာ သွားအိပ်ပေးတုန်းက အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ကြားညှပ်ပြီး ပြောပြရသေးတယ်။ အဖွားက မေတ္တာပို့ရင် ပါဠိကို သီးသန့် အရင်တခေါက်ဆိုပြီး နောက်တခါ အဲဒီပါဠိရဲ့ မြန်မာပြန်ကို သီးသန့်ပြန်ဆိုပြီး ဆုတောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲလိုပြန်ဆိုရင် ဒီဗွီဒီယိုထဲမှာ ကိုယ့်ဝန်ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာကို ကောင်းစွာမွေးမြူနိုင်ပါစေလို့ မြန်မာလို ပြန်ထားတဲ့ "သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု" ကို အဖွား ဆိုတာ နည်းနည်းကွဲတယ်။ သူဆိုတာက "မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိတို့ ကောင်းစွာ သယ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ" လို့ ဆိုပြီး ဆုတောင်းပါတယ်။ အဲဒီတကြောင်းကို ကြားတိုင်း ကျွန်မကအမြဲရီတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်မှ သိပ်မရောက်ဖူးတော့ အတော်အသင့် ၀တဲ့သူတွေကို တွေ့ဖူးပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးလို ဆွဲပြီး သွားနေရလောက်တဲ့အထိ ၀တဲ့သူတွေကို ကျွန်မ မတွေ့ဖူးတာ အမှန်ပဲ။ ပြီးတော့ ဘာပစ္စည်းမှ ထမ်းထား ရွက်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်း သွားလာလှုပ်ရှားနေရတာကို ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို သယ်ပြီး သွားနေရတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး တခါမှ မဖြစ်ဖူးသလို တခါမှ မတွေးထင်မိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် "အဖွားကလည်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ်က ဘာသယ်နေစရာလိုလို့လဲ တကူးတက ခေါင်းပေါ်မှာ ရွက်ထားရတာလည်း မဟုတ် ပုခုံးနဲ့ထမ်းထားရတာလည်း မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ခန္ဗ္ဓာကိုယ်ကို မသယ်နိုင်တဲ့သူဆိုတာ ရှိနိုင်ပါ့မလား အဖွားရယ် ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမလိုအပ်တာ မရှိနိုင်တာကို လိုက်ဆုတောင်းနေရတာလဲ၊ ဘေးရန်ကင်းဖို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးရင် တော်ပြီပေါ့" လို့ ပြောပြီး ကျွန်မ အမြဲရီတယ်။
အဖွားကတော့ "မီးငယ်မမြင်ဖူးလို့ပါ လူတွေမှာလည်း အများကြီး ရှိတယ် ဗြိတ္တာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်" လို့ ပြောပေမဲ့ ကျွန်မ တခါမှ အမြင်ဖူးတော့ မယုံဘူး။ ဒါပေမဲ့ သားကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားစဉ် ကိုယ်ဝန် ၆ လနောက်ပိုင်း ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ၀န်တခုအနေနဲ့ သယ်နေရတာကို စတင်ခံစားဖူးပြီး မွေးခါနီးလေ ၀န်ပိလေ ခံစားလာရမှ ၀တဲ့သူတွေလည်း ဒီလိုခံစားရမှာပဲ ဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီး အဖွားဆုတောင်းကို နည်းနည်း နားလည်လို့ရလာတယ်။ အခုတော့ ဆေးရုံတွေ Disable service တွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ယူနေရတဲ့ အဲလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသယ်နိုင်တဲ့ လူတွေကို အများကြီး တွေ့နေရတော့ သူတို့ကို တွေ့တိုင်း အဖွားရှိတုန်းက နေ့တိုင်း ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ လူအမျိုးစားတွေ အများကြီး ရှိပါလားဆိုတာ ပိုပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်။ အဖွားကို ကျွန်မ ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်း သားကိုပြောပြတော့ သားက တကယ်ကို သဘောကျပြီး မေမေက ဒီလောက်တောင်ပဲ ဗဟုသုတနည်းတယ်ဆိုပြီး ရီလိုက်တာ တော်တော်နဲ့ကို မရပ်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ သူ့ကို ဆက်သင်ပေးဖို့ စည်းရုံးလို့ရသွားတယ်။
မေတ္တာပို့ကို ပြန်ဆက်ရင် တမျိုးစီအတွက် ဆုမတောင်းဘဲ သဗ္ဗေသတ္တာ အဝေရာဟောန္တု ဆိုပြီးပဲ အားလုံးအတွက် ခြုံပြီး တကြိမ်တည်းပဲ ဆုတောင်းလိုက်ရင် ဆုတောင်းသူရဲ့ မေတ္တာ ဓါတ်က အဲဒီဆိုလိုက်တဲ့ ခဏလေးမှာ မိမိမြင်ယောင်လို့ရသူ (သို့) မိမိနဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူတွေဆီကိုပဲ စူးရှနိုင်လိမ့်မယ်။ စင်္ကြာဠာ အနန္တက သက်ရှိတွေအားလုံးဆီကို ဘယ်လိုမှ ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ တမျိုးစီ သီးသန့် ဆုတောင်းလိုက်တော့ သဗ္ဗေဒေ၀ါ ဆိုလိုက်တာနဲ့ နတ်တွေဗြဟ္မတွေဆီ စံမြန်းနေတဲ့ပုံကို မြင်ယောင်ပြီး စိတ်ကချက်ချင်း သူတို့ဆီရောက်သွားမယ်၊ သဗ္ဗေ ၀ိနိပါတိက လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ငရဲမီးတွေဝိုင်းပြီး ငရဲမှာ ငရဲသားတွေ ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပုံကို ချက်ချင်းမြင်ယောင်ပြီး ပို့ပေးတဲ့ မေတ္တာဓါတ်က ပိုပြီးစူးရှမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အားလုံးအတွက် တခွန်းတည်းနဲ့ ချုပ်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်ရင် မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေတဲ့ (သို့) စိတ်ကူးထဲမှာ နေရာယူနေတဲ့ သူတယောက်ဆီကိုပဲ မေတ္တာက ရောက်ပြီး ကျန်တဲ့သတ္တ၀ါတွေဆီကို ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အားလုံးပါအောင် ရည်ညွန်းပြီး ဆုတောင်းတာ မေတ္တာပို့ပေးသူအတွက် ပိုပြီး အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ လိုအပ်လို့သာ ဘုရားက ဒီလို မေတ္တာစီးဖြန်းပုံကို ဟောခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဆုတောင်းတာ အကျိုးများကြောင်း ရှင်းပြလိုက်တော့ သဘောပေါက်သွားပြီး သူသင်ပါ့မယ် မေတ္တာပို့ကို သူရအောင်ကျက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဖွားတုန်းက ကျွန်မကို သင်ပေးတာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ သားကိုတော့ ပါဠိကို အလွတ်ရွတ်နိုင်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ကို ပြန်ရှင်းပြနိုင်တဲ့အထိ ကျွန်မ ဖြစ်အောင်သင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ပြုလုပ်သောကုသိုလ်နဲ့ ဒီပို့စ်အတွက် ရတဲ့ကုသိုလ်ကို ဘယ်ဘုံဘ၀ကို ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ တမလွန်က အဖွားအတွက် ဆုတောင်းအမျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ယထာ လဒ၊္ဓ သမ္ပတ္တိယော
မာဝိဂစ္ဆန္တု ကမ္မဿကာ။
Posted in: ဘာသာရေး,မျှဝေခြင်း,သားသား
ှ မောင်မေတ္တာ says:
July 2, 2011 at 3:56 AM Reply
ကလေးတို့အတွက် မေတ္တာပို့ ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ပို့စ် တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
July 2, 2011 at 5:25 AM Reply
သူများမြင်ဖို.ရေးတာထက် ကိုယ်.စိတ်ထဲမှာ တရားရှိဖို. ပိုအရေးကြီးတယ်..
၄၁ နှစ် ဆိုတာ မငယ်တော.ဘူး
July 2, 2011 at 6:44 AM Reply
မင်းအမေ ၄၁ နှစ်တုံးက စိတ်ထဲမှာ တရားမရှိတာတော့ ငါ သိတယ်..
July 2, 2011 at 9:59 PM Reply
ကလေးကို ရှင်းပြတာလေးကလည်း နမူနာယူထိုက်ပါ
July 2, 2011 at 11:16 PM Reply
မောင်မေတ္တာနဲ့ ငြိမ်းနိုင် - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကလေးရော လူကြီးအတွက်ပါ အဆင်ပြေအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ပါဠိ၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ သုံးမျိုးကို တခုတည်းဖတ်ချင်သူတွေ ကွဲကွဲပြားပြားဖတ်လို့ရအောင် တမင်ကို အချိန်ပေးပြီး အရောင် ခွဲထားပေးပါတယ်။
July 3, 2011 at 12:39 AM Reply
မငယ်နိုင် ရေးတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ ပို့စ် အောက်မှာ မငယ်နိုင်ကို အမြဲ နှောင့်ယှက်နေတဲ့ ရုရှက စစ်ဗိုလ် mg က Anonymous အနေနဲ့ မဖွယ်မရာ မှတ်ချက် တခု လာရေးထားတာကို ဖျက်လိုက်ပါ ခင်ဗျား။
စီဘောက်မှာ ရေးလို့ မရလို့ ကွန်မန့် မှာ ရေးလိုက်ရတာပါ။
July 3, 2011 at 12:43 AM Reply
မငယ်နိုင် ရေးတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်လွှာ ပို့စ် ( http://nge-naing.blogspot.com/2011/06/blog-post_16.html ) အောက်မှာ မငယ်နိုင်ကို အမြဲ နှောင့်ယှက်နေတဲ့ ရုရှက စစ်ဗိုလ် mg က Anonymous အနေနဲ့ မဖွယ်မရာ မှတ်ချက် တခု လာရေးထားတာကို ဖျက်လိုက်ပါ ခင်ဗျား။
July 3, 2011 at 12:04 PM Reply
ဒီပို့ စ် အတွက် အမကို အရမ်း အရမ်းကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ အမျိုးသားကိုလည်း ဒီလို သင်ပေးလို့ ၊ ရှင်းပြလို့ရနိုင်တယ် ဆိုတာလေးပါ သိလိုက်ရလို့ ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို လေး ပါ ပါတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
၀မ်းသာပါတယ် Anonymous (July 3, 2011 12:04 PM)။ပါဠိအသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ နီးစပ်သလို ရေးပြီး ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်မသားကိုလည်း မြန်မာစာမရတော့ ဒီလိုပဲသင်ပေးနေရတယ်။ သွားရင်းလာရင်း အလုပ်လုပ်ရင်း သီချင်းညည်းရင် ကုသိုလ်လည်းရ အပျင်းလည်းပြေ ဖြစ်အောင် ဒီမေတ္တာပို့ကိုပဲ ညည်းပါ။
(မြန်မာပါဠိမရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ပါဠိအသံထွက်ကို ကျွန်မ တတ်သလောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ နီးစပ်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ရေးထားပေးပါတယ်။ စာလာဖတ်သူများထဲမှ ပါဠိလိုကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ ရေးတတ်သူများ ဖတ်မိလို့ မှားနေရင် မှတ်ချက်ထဲမှာ ပြင်ဆင်ချက်ကို ရေးထားပေးခဲ့စေချင်ပါတယ်။)
July 6, 2011 at 2:26 PM Reply
ဒကာမ မငယ်နိုင်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးကိုမြင်တော့ ကရုဏာသက်မိတယ်..။ ပါဠိကို ရိုမန်အက္ခရာနဲ့ ပြောင်းဖို့ သော့ချက်ကို မသိရင် ပင်ပန်းသလောက် အရာမရောက်ဘူးပေါ့..။ ဒီမှာ ဒကာမအတွက် အလွယ်တကူ အသုံးပြုပုံနိုင်ဖို့ မေတ္တာပို့ (ပါဠိ+အင်္ဂလိပ်)http://www.buddhanet.net/chant-metta.htm
July 6, 2011 at 7:33 PM Reply
မေတ္တာပို့ ပါဠိကို အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ ရေးထားတဲ့ Link ကို Comment နေရာမှာ ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော် အရှင်ဓမ္မဂင်္ဂါကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပင်ပမ်းတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အရှင်ဘုရား ထင်သလို အရာမရောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလိုနဲ့ ပါဠိ ဖတ်မတတ်လို့ တပည့်တော်မသားက တပည့်တော်မ ဖန်တီးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်ပါဠိကိုပဲ ဖတ်နေတာ မေတ္တာပို့ စကားလုံးတွေကို တော်တော်လေး ရင်းနှီးနေပါပြီ။ ပါဠိကို ဗမာဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဆိုတာက အသံတချို့ တော်တော်လေး ကွာတာ တွေ့ရပါတယ်ဘုရား။ အခု ဦးဇင်းပေးတဲ့ Link ကအတိုင်း ပြန်ပြင်ရေးထားတော့ တချို့ အသံထွက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဆ (s) နဲ့ သ (th)၊ ဇ (z) နဲ့ ဂျ (j) အသံတွေကို နည်းနည်း ပြန်ရှင်းပြပြီးမှ သားကို ဖတ်ခိုင်းမှ ဖြစ်နိုင်မယ်။ နို့မဟုတ်ရင် မေမေ့ ဘုရားရှိခိုးကလည်း အခုတမျိုးတော်ကြာတမျိုးပါလားလို့ စောတကတက်လာနိုင်တယ်ဘုရား။ နောက်ပိုင်းလည်း သားကို ဘာသာရေးအကြောင်း ရှင်းပြဖို့လွယ်အောင် အရှင်ဘုရားရဲ့ ပါဠိ သင်ခန်းစာကိုလည်း ဖြစ်အောင် လေ့လာမယ်။ အခုလာပေးတဲ့ Link အတွက်ရော ပါဠိသင်ခန်းစာအတွက်ပါ (သာဓု)၃ ပါဘုရား။
မငယ်နိုင် သား အပါအဝင် မြန်မာစာကို လုံးဝ မဖတ်တတ်တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာစာကို နည်းနည်းပဲ ဖတ်တတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာကလေးတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ ဗွီဒီယို လင့်တခု ကို အောက်မှာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ ဗွီဒီယိုမှာ -
(၁) မငယ်နိုင် တင်ထားတဲ့ မေတ္တာပို့ ပါဠိသီချင်းရဲ့ ပါဠိစာသားကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ စာတန်းထိုးထားပါတယ်။
(၂) မငယ်နိုင် တင်ထားတဲ့ မေတ္တာပို့ ပါဠိသီချင်းရဲ့ ပါဠိစာသား အဓိပ္ပါယ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတာကို စာတန်းထိုးထားပါတယ်။
July 8, 2011 at 9:38 PM Reply
ဗွီဒီယို Link အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအာယု၊ ကျွန်မ ဒီဗွီဒယိုကို အပေါ်ဆုံးမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပါဠိစာသားကို အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ လိုချင်လို့ google မှာရော Youtube မှာပါ အစောပိုင်းက ကျွန်မရှာတာ လုံးဝမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပို့စ်က ကြည့်ရင် ဘာမှမထင်ရပေမဲ့ ကျွန်မ တော်တော်လေးကို အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်ပို့လာတဲ့ Link နဲ့ ကိုအာယု အခုပို့လာတဲ့ ဗွီဒီယို Link ကို စောစောစည်းစည်းကသာ ရခဲ့ရင် ဒီပို့စ်အတွက် ကျွန်မ အဲလောက်အလုပ်ရှုပ်မှာ မထင်ဘူး။ ဒီပို့စ်ကို ကျွန်မသားတယောက်တည်းအတွက် ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲ အားလုံးအချိန်မရွေး လေ့လာနိုင်အောင် နောက်ဆို ဆိုက်ဘားမှာ တင်ထားပေးဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
January 20, 2012 at 4:16 AM Reply
AMC Alliance AC Compressor
May 13, 2012 at 12:33 AM Reply
"ဟဲ ..သား အဲလိုမပြောရဘူး ငရဲကြီးမယ် အဲဒါကို တီထွင်တာ တခြားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ မဟုတ်ဘူး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် တီထွင်ခဲ့တဲ့ မေတ္တာ စီးဖြန်းနည်းပဲ " Are U Sure?
May 13, 2012 at 1:06 AM Reply
((((" Are U Sure?))))
White Devil သေချာလား မသေချာလား သိချင်ရင်တော့ ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေကိုပဲ သွားမေးပါ။ မေတ္တာသုတ် အပါအ၀င် ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေ အားလုံးက ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကို အရှင်အနန္ဒာက ပြန်ပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်တယ်။ မေတ္တာပို့ကို ဘုရားရှိခိုးပဲ ဆိုဆို၊ သီချင်းလုပ်ပြီးပဲဆိုဆို အဓိက အခြေခံက မေတ္တာသုတ်ထဲက ပြန်လည်ကောက်နှုတ်ပြီး စပ်ထားတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဘုရားလက်ထက်က မြတ်စွာဘုရား ပေးတဲ့နည်းအတိုင်း မေတ္တာပို့တာကို သံဃာတော်တွေက အခုလက်ရှိအချိန်ထိ သယ်ဆောင်လာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ကျွန်မတို့ဘိုးဘွား ဘီဘင်တွေကို အမွေပေးခဲ့လို့ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင် ကျွန်မတို့ သားစဉ်မြေးဆက်အထိ အမွေခံရရှိနေတာ ဖြစ်တယ်။ မေတ္တာပို့အပါအ၀င် သုတ်တိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်း ရှိပါတယ်။ မေတ္တာပို့ကို ဘုရားတီထွင်တာ ဟုတ်မဟုတ် အတိအကျသိချင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ လိုက်မေးနေစရာ မလိုဘဲ သိနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံးနည်းက ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ထဲက မေတ္တာသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာဖို့ ကျွန်မ အကြံပြုပါတယ်။ ပြီးတော့ မေတ္တာရဲ့ တန်ခိုးကို စမ်းသပ်ချင်ရင် အခုဒီမေတ္တာပို့ထဲက ပါဠိလိုကို နားမလည်လို့ မဆိုချင်ရင်ထားလိုက်ပြီး မြန်မာလို (သို့) အင်္ဂလိပ်လိုကို White Devil အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ တကယ်သူများကို ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ စိတ်ကိုညွတ်ပြီး ဒီပို့စ်က မေတ္တာပို့ စာသားတွေကို အဲဒီရေးထားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုပါ အာရုံစူးစိုက်ပြီး သုံးကြိမ်ခန့် ရွတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ မေတ္တာရဲ့ တန်ခိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဓိဋ္ဌဓမ္မ လက်တွေ့ပြလိမ့်မယ်။